Boka reMedicines Control Authority of Zimbabwe Rogunun'una neKushambadzwa kweMishonga
Zvita 14, 2011
Boka rinoongora mishonga inotengeswa munyika, reMedicines Control Authority of Zimbabwe, rinoti riri kushushikana zvikuru nekushambadzwa mumapepanhau kuri kuitwa mishonga inonzi inorapa zvirwere zvakasiyanasiyana zvinosanganisira BP neHIV/AIDS.
Boka iri rinoti mishonga iri kushambadzwa iyi inenge ichinzi inoita mashura pazvirwere izvi, uye vamwe vari kuishambadza vanonzi vanovimbisa mari kune vanenge varapwa vachiponeswa nemishonga iyi.
Boka iri riri kukurudzira veruzhinji kuti vasiyane netsika yekunyengedzwa nevanoti vane mishonga inoponesa ava.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzehutano pamwe nezvehupfumi dzinoti nekuda kwekutambura kunenge kwaita vanhu, vazhinji vanozongomhanyira chero kunenge kwanzi kune chinokwanisa kuvabatsira padenda ravanenge vainaro.
Hatina kukwanisa kubata mukuru weboka reMedicines Control Authority of Zimbabwe iri, uyo anzi ndiye chete anokwanisa kutaura nesu, sezvo anzi anga ari mumusangano.
Sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Doctor Douglas Gwatidzo, vanoti vanowirirana neboka reMedicines Control Authority of Zimbabwe, sezvo mimwe mishonga inenge isina kuongororwa iyi ichizoguma yakuvadza hutano hwevanenge vachiishandisa.
Hurukuro naDoctor Douglas Gwatidzo